တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၏အချိန်စာရင်းများကြေငြာ | Danya Wadi
Browsing: » Home »သတင်းများ»တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၏အချိန်စာရင်းများကြေငြာ	Leaveacomment
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ၏အချိန်စာရင်းများကြေငြာ	Posted by danyawadi on December 12, 2015 in သတင်းများ	တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအချိန်စာရင်းများကို ပညာ ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒီဇင်ဘာလ၁၁ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်၊
အချိန်စာရင်းများအရ စာမေးပွဲကို ၂၀၁၆ခုနှစ်မတ်လ ၉ ရက် ​နေ့တွင်စတင်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်​။
၉. ၃. ၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာဘာသာရပ်၊
၁၀.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်၊
၁၁.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်၊
၁၂.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ဘာသာရပ်၊
၁၄.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်၊
၁၅.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ရူပဗေဒဘာသာရပ်၊
၁၆.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်နှင့် ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်၊
၁၇.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ပထ၀ီဝင်ဘာသာရပ်၊
၁၈.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် သမိုင်းဘာသာရပ် တို့ကိုအသီးသီးဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
← အာဏာ အလွှဲအပြောင်း ချောမွေ့ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်း	သမ္မတဆီက ငြိမ်းချမ်းရေးဆု တက်ယူနေတုန်းမှာ ဘောင်းဘီ ကျွတ်ကျခဲ့တဲ့ အမျိုးသား →